HTC U12 ရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ! – AsiaApps
HTC U12 ရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ!
February 6, 2018 February 6, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on HTC U12 ရဲ့ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ!
HTC အနေနဲ့ U12 ရဲ့မျက်နှာပြင်ပုံရိပ်တွေကိုတော့ Taiwan 5G industry event မှာချပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ iamaniff နဲ့ Evan Blass တို့ရဲ့ Post ကနေတဆင့်သိရှိခဲ့ရတာပါ။
“HTC today (1/29) participated in the inaugural meeting of “Taiwan 5G Industry Alliance – Chunghwa Telecom Pilot Team,” featuring Vive PRO, Vive Focus, unlisted VR devices from Taiwan and HTC phones that have not been released to the public” pic.twitter.com/dZaMBygO39
Event မှာချပြခဲ့တာကတော့ တကယ့် HTC U12 မဟုတ်ပဲ U12 ထွက်ရှိမယ့်အခါဖြစ်ပေါ်မယ့် ဒီဇိုင်းအနေအထားနဲ့ မျက်နှာပြင်သာဖြစ်ပါတယ်။ U12 ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၆ လက်မရှိနေပြီး နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ U11+ တုန်းကထက်အနည်းငယ်ပိုကွေးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ မျက်နှာပြင်မှာတော့ 18:9 display ပါဝင်ပါတယ်။ Resolution ပိုင်းကတော့ 1440x2880px ဖြစ်ပြီး Super LCD6 နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ CPU ပိုင်းမှာလည်း Snapdragon 845 ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး6GB RAM လို့ဆိုထားပါတယ်။
U11 + တုန်းကလိုပဲ ရေစိုခံအောင်ဖန်တီးထားသလို ကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီပါဝင်ပါတယ်။ U11 + တုန်းကလို ဘက်ထရီ သိုလှောင်မှုများပြီး ကုန်ခမ်းတာမမြန်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်ပါပုံအရဆိုရင် Download အမြန်နှုန်းကိုလည်း 809.58 Mbps အထိဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
HTC အနေနဲ့ U12 ရဲ့ Spec ကိုတော့တရားဝင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ Spec ဟာ ဖုန်းရဲ့ပုံရိပ်ဒီဇိုင်းအပေါ်ကိုအခြေခံပြီး ခန့်မှန်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ Spec သာမက စတင်မိတ်ဆက်မယ့်ရက်ကိုလည်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပြန်ပါဘူး။
Android, HTC, Rumors
ရုပ်ရှင် ဝါသနာအိုးတွေအတွက် Letterboxd — Your life in film
Huawei Mate 10 Pro နဲ့ P10 ကိုပရိုမိုးရှင်းပြုလုပ် ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ Three UK!